KF94 (nooca willow leaf) mashiinka otomaatigga maaskaro waa mashiin si buuxda otomaatig u ah soosaarka wajiyadda KF94. Waxay u isticmaashaa tikniyoolajiyadda 'ultrasonic' inay ku xirto dhar aan tolmo lahayn oo PP ah iyo qalabka lakabka shaandhada, oo jarjar jirka maaskaro isku laaban sida ku cad alaabada ceeriin ee la isticmaalo. Maaskarada waxay gaari karaan heerar kala duwan. Dhagaha gogosha ayaa ah dhar laastik ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn, taas oo ka dhigaysa dhagaha qofka xidhanaya mid raaxo leh oo aan walwal lahayn. Lakabka miiraha miiraha maaskaro wuxuu leeyahay saameyn wanaagsan oo shaandhayn ah, oo si fiican ugu habboon wejiga Aasiya.
1.It waxay qaadataa wax soo saar isku dhafan, mashiinka oo dhan waa hawlgal otomaatig ah, fudud oo dhakhso leh, makiinadani waxay u baahan tahay kaliya hal qof oo ku shaqeeya.
2. Way yartahay cabirkiisuna ma fadhiyo boos badan. Waxay qaadataa qaab dhismeedka daawaha aluminium, qurux badan oo adag.
3. Xakamaynta barnaamijyada PLC, heer sare oo otomaatig ah, soo saarista qalabka korontada, si looga fogaado khaladaadka, loo yareeyo qashinka.
4. Waxaa lagu qalabeeyaa xakamaynta xiisadda jirka, quudintu waa mid fidsan oo aan duuduubnayn, cabbirka badeecaddu waa sax, kala-goysyada alxanku waa kuwo aad u fiican, sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa silsiladda SMC, waalka solenoid, caaryada daawaha ah ee titanium, waara iyo waxtarka sare.
5. Khadadka wax soo saarka oo dhami waa kuwo aad u caqli badan, kaas oo si weyn u yarayn kara tirada hawl wadeyaasha. Waxay leedahay tiknoolajiyad casri ah, qaab-dhismeed macquul ah, hawlgal lagu kalsoonaan karo, hawlgal habboon iyo wax-soo-saar sare oo wax soo saar leh.
Mashiinka sameynta maaskarada dhegaha ee laastikada waa xawaare sare oo si buuxda otomaatig u ah. Lakabka gudaha iyo dibedda ee maaskaro waxaa loo sameeyaa dhar aan tolmo lahayn, lakabka miiraha dhexe ee dharka dhalaalaya oo suufka la afuufayo, buundada sanka ayaa ah wax laastik ah, sidaa darteed maaskaradu aad ayey u raaxeysan tahay.
Mashiinka ayaa soo saari kara 2 cabbir maaskaro ah, oo ku habboon dadka waaweyn iyo carruurta.
Xawaaraha sare ee nooca wax soo saarka maaskaro isku laab laaban ee KN95. Mashiinkaani wuxuu quudiyaa duubka oo dhan, oo leh lakabyo kala duwanaan oo isku duuban oo isku duuban oo isku duuban, oo leh gogosha dhegaha iyo alxanka, labada duub ee dhegaha ayaa si otomaatig ah u jajabaya oo jaraya, ka dibna jirka maaskaro ayaa loo laabay laab. Kadib alxanka ultrasonic iyo isdhexgalka, maaskarada ayaa ugu dambeyntii la rogaa oo la sameeyaa. Waxay ku guuleysan kartaa joogsi la'aan, otomaatig ah, wax soo saar wax ku ool ah oo sarreeya.
Mashiinka alxanka dhegaha ee loo yaqaan 'KN95 semiauto earloop alxanka', kaas oo qaata ultrasonic si uu uxuulo dhego-beelka laastikada ah ee labada dhinac ee maaskaro KN95. Kaliya hal hawlgaliye ayaa loo baahan yahay si loo dhammaystiro dhammaan howlaha alxanka dhegaha.
Mid ka mid ah jiitaa mid ka mid ah mootada mashiinka dhegaha mashiinka sameeya ee mashiinka dhegaha lagu xiro
Xawaare sare hal jiir hal mashiin mashiinka dhegaha furan ee banaanka waa qaab aad ufiican oo heer sare ah oo wax ku ool ah, oo ay kuxirantahay xariiji xambaarsan, oo ay kujiraan mashiinka sameynta maaskaro iyo mashiinka alxanka dhegaha dhegaha ee servo
Mashiinka alxanka dhegaha ee gacanta, waa laba mashiin oo alxamid, fudud, fudud, qiimo jaban, kaliya u baahan hal hawl wade.
Mashiinka alxanka dhegaha ee loo yaqaan 'Semiauto alxanka dhegaha', oo ay ku xiran yihiin xariijiye xambaarsan, farsamo jiidaya dhegaha, farsamaynta alxanka ultrasonic, habka aqbalida maaskaro. Ka dib marka jirka maaskarada lagu sameeyo mashiinka jarista maaskaro, ka dibna jirka maaskarada waxaa la gelinayaa suunka mashiinka alxanka dhegaha furan, wuu dhameystiri karaa dhego-beelka tooska ah ee alxanka. Fikradda naqshadeynta ee mashiinka alxanka dhegaha ee semiauto: fudud oo si sahlan loo isticmaali karo, alxanka tooska ah, xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, oo leh kala duwanaansho wanaagsan, iswaafajin, iyo waxqabadka qiimaha.